Sawirro: Suuqa Bakaaraha oo maanta u xiran kooxda Daacish: Sidee wax u socdaan? - Idman news
Sawirro: Suuqa Bakaaraha oo maanta u xiran kooxda Daacish: Sidee wax u socdaan?
Muqdisho (Caasimada Online) – Suuqa weyn ee Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho qeybo badan ayaa xiran Maanta, sababta waa in kooxda hubeysan ee Daacish awaamiir canshuur bixin ah dul dhigtay Ganacsatada Suuqa Bakaaraha, sida ay noo xaqiijiyeen ganacsatada.
Waxaa xiran inta badan dukaamada iibiya qalabka dhismaha ee ku fidsan Wadada Labaad ee Suuqa Bakaaraha ama sida dadka badi u yaqaanaan Jid Mareexaanka, waxaa kaloo xiran inta badan dukaamada iibiya Alaabta Bagaashka ah iyo qeybo kamid ah kuwa iibiya Daawada.
Kooxda la yiraahdo Daacish ayaa maalmihii lasoo dhaafay culeys xoog leh saartay Ganacsatada Magaalada Muqdisho, si gaar ah kuwa Suuqa Bakaaraha, sidaas waxaa noo xaqiijiyey illaa 4 qof oo kala duwan oo kamid ah Ganacsatada waaweyn ee Suuqa Bakaaraha.
Dhawaan waxaa la sheegay inay kooxdaan qarxisay meel u dhow Shirkadda Muumin Group, ujeedkana waxaa lagu sheegay “is furta oo Lacag bixiya.”
Ganacsatada ayaa la sheegay inay isku waafaqi waayeen lacag bixinta, waxayna saaka badankood qaateen go’aan ah inay xiraan goobaha ganacsiga.
Waxay sheegeen ganacsatada aan la hadalnay inaysan bixin karin lacagta lacagta ay kooxda rabto maadaama sida caadiga ah ay bixiyaan laba canshuur oo kala duwan oo kala ah midda dowladda iyo tan Al-Shabaab.
Tan waa canshuurtii Sedexaad oo laga rabo ganacsatada Magaalada Muqdisho. Dhowr qof oo arrintaasi ka hortimid ayaa la sheegay inay beegsatay kooxda.
Qaar kamid ah ganacsatada Suuqa Bakaaraha ayaa la sheegay inay mar soo jeediyeen in kooxdaan la iska difaaco, laakiin waa la isku raaci waayey.
Tusaale waxaa naloo siiyey shirkadaha iibiya qalabka Electronics-ka kuwaas oo markii ay is difaacii isku raaci waayeen go’aansaday inay lacagta iska bixiyaan, sidaasna hadda ku shaqeysta.
Kal hore waxaa la sheegay in kooxdaan Daacish xirtay qeybo kamid ah Suuqa raashinka, laakiin markii dambe waxaa la sheegay in ganacsatadii inay iska bixiyeen lacagtii ay kooxda rabtay, balse iyaguna qiimaha maciishada ayey kor u qaadeen.
Tallaabadaas kadib, maciishada ayaa la sheegay inay kor u kacday 10% muddooyinkii lasoo dhaafay. Kooxdaan muddo ka hor ayey sidaan usoo xoogeysatay, balse waxay isku dhaceen kooxda kale ee Al-Shabaab, kuwaas oo ugu dambeyntii ka hor istaagay qorshahoodii, balse hadda waa soo rogaal celiyeen.
Sanadku waa cusub yahay, lacagta ganacsatada laga rabana waa mid sanadeed, qof kamid ah Dadka aan la hadalnay oo aan waydiinay qiyaasta waxa ay kooxdu rabto, wuxuu sheegay in dukaankii ay saaran tahay alaab qiimo ahaan dhan 60 illaa 70 Kun oo Dollar inay kooxdi ka rabto wax ku dhow 10 Kun oo Dollar, taas oo uu sheegay inay adag tahay bixinteeda.
“Dhib badan ayaan wajaheynaa, waad la socotaan in Dowladda canshuur naga qaado sidoo kalana ay Al-Shabaab canshuur naga qaadaan, haddana Daacish darteed ayey ganacsayadeenii u xiran yihiin Maanta, xisaabta ay rabaan waa badan tahay, haddii aad diidaan tallaabo ayaa la idinka qaadayaa ayey leeyihiin, ujeedku waa naftaada ama maalkaaga, uma jeedno cid na difaaceyso, anaga maahin dad hubeysan oo is difaaci kara, haddii aan isku daynana waa isku raaci weynay, waxaan nahay Ummad dhinac walba ka dhiban,” ayuu yiri mid kamid ah ganacsatada aan la hadalnay ee Suuqa Bakaaraha.
Qaar kamid ah Ganacsatada waxay sheegeen inay ka fakarayaan in dhinacyadii horey u canshuuri jiray ee Dowladda Federaalka ah iyo Al-Shabaab inay la fadhiistaan oo ay kala doodaan inay canshuurtooda dhimaan si ay kooxdaan isaga badbaadiyaan ama inay iyagu keenaan xal u badbaadin kara naftooda iyo maalkooda.
Dadka Caasimadda ku nool dhinac walba ayey ka dhiban yihiin, Hanti, Naf iyo mustaqbal midna uma dhaqna, mana jirto aragti dhexdooda taala oo badbaadin karta kumana mashquulsana intaas la helo, gacan dowladeed oo arrintaan ku howlana ma jirto, waxaana Maanta la kala dooradsiinayaa Dadka Reer Muqdisho inay seddex canshuur bixiyaan ama inay shaqo la’aan noqdaan.
Waxaa la eegayaa sida laamaha ammaanka ee Dowladda Federaalka ah uga jawaabaan midda maanta taagan.
Previous Sawirro: RW Roonle oo kulan lagu dhameeyey khilaafkii soo dhexgalay la qaatay Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guled
Next Sawirro: Rooble oo heshiis cusub kala dhex dhigay Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed